ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ မြေဆီလွှာထုတ်ပေးအေးဂျင့် မှအရည်အသွေးမြင့် မြေဆီလွှာထုတ်ပေးအေးဂျင့် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
Taiwan ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, CHERNG LONG ENTERPRISE CO., LTD. ပေးလူသိများသောကုမ္ပဏီခဲ့ မြေဆီလွှာထုတ်ပေးအေးဂျင့် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအတွက်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စည်းများအားလုံးလိုက်နာဖြစ်ကြောင်းနှင့် delivery မီ 100% စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်နေပေမယ့်လည်းတစ်ဦးနှင့်အရည်အသွေးကို trustable အမှတ်တံဆိပ်တက် setting နေကြသည်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင့်တော်သောစျေးနှုန်းနှင့်စိတ်တွင် prompt ကိုပေးအပ်ခြင်းနှင့်တကွ, ပြည့်စုံသောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောတီထွင်ဆန်းသစ်မှုစောင့်ရှောက်လော့။ ငါတို့သည်လည်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှကြိုဆိုထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပေး! ကျွန်တော်တို့ဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာသင်တို့နှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိလိုရှိ၏။
။ တင်းကြပ်စွာကော်ပိုရိတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ "စံညွှန်းများ" ကိုလိုက်နာရန်, အရည်အသွေးစစ်ဆေး, ဝန်ဆောင်မှု၏ "အကောင်းယုံကြည်ခြင်း" နိယာမမှကြပါသည်, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ "နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိ" မူအရကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်အသက်ရှည်သမျှနောက်ခံအမျိုးမျိုးမှမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်နှင့်လက်လက်သွား ။
ပုံစံ - CL-230
ဤအေးဂျင့် CL-230 ကရေတစ်ခု-စုပ်ယူမဟုတ်သော-ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှဂရုတစိုက်တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်.၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောအေးဂျင့်ကိုကုသပြီးနောက်ကုသမှုပြီးနောက်ဖိုက်ဘာနှင့်နူးညံ့သောထိတွေ့မှုကိုခံစားစေသည်,နှင့်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်ကနေဆဲသဘာဝနှင့်ဓာတုယက်လုပ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ရောနှောထည်၏စုပ်ယူဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
၎င်းကို fluffy နှင့်ပျော့ပျောင်းသောထိတွေ့မှုရရှိစေရန် gauze သို့မဟုတ်အထည်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ.
ဤသည်အေးဂျင့်သည်သဘာဝနှင့်ဓာတုအမျှင်များ၏ရေစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် ၄ င်းရောစပ်မှုများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.
ချည်သို့မဟုတ်အထည်အမျိုးအစားအရသောက်သုံးသောပမာဏမှာ ၂ ဖြစ်သည်~6%.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.textileauxiliaries.com.tw/my/soil-release-agents.html
အကောင်းဆုံး မြေဆီလွှာထုတ်ပေးအေးဂျင့် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် မြေဆီလွှာထုတ်ပေးအေးဂျင့် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ မြေဆီလွှာထုတ်ပေးအေးဂျင့် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
Anti Cracking အေးဂျင့်
Soil Release Agents	| Agent De Soil Release	| Hydrophiler Weichmacher	| Соил Релеасе	| Agente Soil Release	| Soil Release	| मृदा रिलीज एजेंट	| Agente Anti Tinción	| Soil Release Agents	| عوامل تحرير التربة	| Hóa Chất Soil Release	| สารปลดปล่อยดิน	| Agen Pelepas Tanah	| মাটি রিলিজ এজেন্টস	| Toprak Ayırıcılar	| 紡織易去汙劑